FARSHAXANNO KA SAMEYSAN KAREEM, GEED IYO GEED: TALLAABOOYIN TALLAABO TALLAABO AH OO AY LA SOCDAAN GACMAHOODA, CARRUURTA, SANNADKA CUSUB, SANNADKA EYGA - SAMEE NAFTAADA
Malaha, ma jiro qof aan waligiis isku dayin in uu sameeyo farshaxan ama dahab la leh gacmihiisa. Laakiin qaar ka mid ah, tani waa uun xusuusta carruurnimada, halka qaar badani ayan ka tanaasulin shaqadan xataa xataa qaan-gaarnimada.
Intaa waxaa dheer, dabeecada si joogto ah ayaa nagu soo dejiya dhammaan qalabka muhiimka ah. Iyo kuwa ugu caansan ee iyaga ka mid ah, dabcan, finan.
Xeerarka diyaarinta alaabta dabiiciga ah
La shaqee banaanbaxa waxay ku bilaabmayaan hawlahooda. Xaqiiqdu waxay tahay in qoob-ka-soo-baxyada ay hoos u dhacaan laanihii la xidhay, laakiin heerkulka qolka si deg-deg ah ayey u furan yihiin, mana jiraan meel ka fogaan la'aanta.
Way fiicantahay inaad barato sida loo qurxiyo gurigaaga sanadka Cusub.
Badbaadi ama saxeex foomka hababka fudud:
Si aad uhesho foomka la xiray, ururinta 30 ilbiriqsi ayaa lagu dhajiyay xabagta qoryaha (iyo gebi ahaanba).
Dhanka kale, habka shaacinta waa la xoojin karaa. Si arrintan loo sameeyo, qaybta shaqada waa la kariyaa ilaa nus saac, ka dibna la qalajiyo bateriga. Qaabka kale waa foornada 2-saac gudaheed oo ah 250 ° C.
Si aad u bixiso qaab aan caadi aheyn, maaddada waxaa la dhigaa biyo, oo ku xiran dhambaal meesha saxda ah. Iyadoo qalajin dheeraad ah oo ku saabsan battariga, meeshan ayaa hoos u dhigi doonta, shaqaduna waxay u egtahay ubax.
Marka la abuuro "banaan" janno "jiilaal" ah ayaa badanaa la jaraa. Tani waxay ka caawineysaa xalka biyaha iyo cadawga, in si siman loo qaato. Daahinta walxahaas oo kale ku jirta weel ayaa la dhigayaa halkaa. Waa in ay gebi ahaanba iska riixaan (waxay u baahan yihiin cadaadis). Saameyn - ugu yaraan 5 saacadood, adoo sii dhaqaya iyo qalajinta.
Qalabka qallalan ee ku jira foornada
Waa muhiim! Boosaska waxaa lagu caddeeyay oo keliya meelaha hawada ku jirta.
Nidaamyadan fudud ee diyaarinta waxay gacan ka geystaan ​​inay keenaan sheyga xaalad la rabay - oo la siiyay muuqaal ama midab la doonayo, isla mar ahaantaana la sameeyay iyo jeermis.
Maxaa laga samayn karaa koontooyinka
Boorashku wuxuu noqon karaa saldhigga culus ee farshaxanka - laga bilaabo tirooyinka xayawaanka hoose ee xitaa kuwa yaryar wax ka qaban kara, iyo soo afjarida qaab dhismeed cajiib ah, kulankaas kaas oo u baahan doona xoojinta iyo xisaabinta qaar.
Aynu bilowno waxyaabaha ugu caansan - tusaale ahaan, qalabka guryaha lagu ciyaaro ee qaabka xayawaanka.
Waxyaabaha wanaagsan ee shubanka
Ka dib markii uu ka fikiro dadka ugu horreeya ee mustaqbalka "menagerie", dad badan ayaa bilaabay inay ka shaqeeyaan shaxanka eeyooyinka - Weli calaamad u ah sanadka soo socda.
Si aad tan u samayso, waxaad u baahan tahay miro yar oo kala duwan, koolada PVA iyo dhoobada. Bilaabidda:
Boomka ugu weyn waxaa loo xilsaaray doorka jidhka.
Midhaha yaryar waxay ku xiran yihiin - midba sida madax, kan kale oo ah dabo.
Marka ay yaryar xitaa yaryar yihiin, waxaa lagu qabtaa hoos ka hooseeya: kuwani waa lugaha eyga.
Waxay u muuqataa in ay soo saarto indhaha, sanka iyo dhegaha oo ka mid ah qaybaha caag ah, waxayna ku hagaajinayaan goobta shaqada.
Tani waa hal doorasho. Xaqiiq ahaan, tirada qaybaha iyo eeyga eeyga oo kale ah waxay ku xiran tahay duulimaadka quruxda - quruxda ugu yar, farshaxanka farshaxanka ah waa mid ku filan, halka carruurta waaweyni ay sameeyaan sheeko dhab ah. Inta badan seashells (dhegaha mustaqbalka), daboolka indhaha iyo xitaa dhejisyada dharka midabada badan leh ayaa loo isticmaalaa. Guud ahaan, wax badan ayaa jira.
Ma taqaanaa? Bixinta maalinlaha ah ee borotiinka - 100-150 qoryaha, intooda badani waa geed.
Fiiri wanaag iyo duufaan, kaas oo aad u baahan tahay nuqullada ugu caansan, qaybo naxaas leh, mugdi madow, maqas iyo, dabcan, xabo (sida ugu fiican - qori sharoobada):
Marka hore samee qiyaasaha - arrinta waxaa lagu dabaqayaa mid ka mid ah geesaha midhaha, halkaas oo jiri doona xabbad.
Kadibna ka gooyay wareega wareegga qiyaasta la rabay, kaas oo lagu qallajiyey qalfoofka, wuxuu ku daboolay jilicsanaa oo lagu dhajiyay shaqada. Wixii xajmi ah ee wareegga wareegga, waxaad samayn kartaa qalliin yar oo ah qaab dalxiis.
Guntooyinku waxay isku dhegaan wajiga - indhaha iyo sanka. Taabashada kama dambaysta ah - dhuunta iyo dhegaha isku midka ah.
Iyadoo ka qaybqaadashada wax la mid ah ayaa la sameeyey xayawaanka:
Meelaha cagaarka ah ama midabkoodu uu cidhiidhi dareemo waxay dareemaan xuduudaha mulkiyada, daboolka iyo nabarka (ma ahan mid xun haddii xayawaanka mustaqbalku uu xajin doono arrin isku mid ah ee hore).
Dabadeedna way gooyeen.
Marka hore waa madaxa - yaryar yaryar ama dhar madow ah (indhaha iyo sanka) ayaa ku xiran saldhigga.
Daboolka ayaa la isku qabsadaa si bareer ah loo dhejiyo - oo sidoo kale taagan.
Kadibna wuxuu ku xiraa laba-laab hoose ee boogaha, dhuuban iyo boorsooyinka hore ee la furay.
Qiyaastii isku midka ah "dabeecada" iyo nidaamka shirarka ee kiiska dawacada. Run, midabada kale ee dharka ayaa loo baahnaan doonaa halkan: habka maaddada waa in uu kudhowaado midabka midab-ba'an, iyo marinnada cad-cad waa in lagu sameeyaa wajiga iyo cirifka daboolka.
Waa muhiim! Haddii aad ku daboosho farsamooyinka gacmaha, waxay sii socon doonaan waqti dheer.
Waxyaabo badan oo jecel dareenka way jecel yihiin xayawaankalaga sameeyay nuqulo furan iyo dhoobo:
Marka hore, iyadoo la caawinayo dadka qaangaarka, dusha sare ayaa loo kala soocayaa (sidaa daraadeed ka dib markaad jarjartey qaybta ugu ballaaran ayaa weli ah - waxay geli doontaa qolofka).
Caleemaha bacalka ee "Brown" oo leh "sausage" oo leh yareyn ballaaran oo hal dhinac ah. Cirridka dhaadheer wuxuu kuxirnaa saldhigga boogaha - madaxa waa diyaar.
Ka dibna xaji oo hubso shaqada qalabka mustaqbalka iyo dabada.
Dhamaan tan waxa si taxadar leh loo soo uruurshay, oo qolofka ayaa la dhigayaa dusha sare. Dhamaadka finalka, indhaha ayaa lagu dhajiyaa qaabka caleenta cagaaran ee cagaaran, iyo gacan-qabashada cadayga ayaad ku dhisi kartaa afka.
Sida aad arki karto, xitaa xayawaan hal xayawaan ah ayaa sameeyn kara xoolo jilicsan, mana qaadan doono waqti dheer.
Sifadani fasaxyada qaboobaha sidoo kale si dhaqso ah ayaa loo sameeyaa. Waxa ugu muhiimsan waa rabitaan, xoogaa khibrad iyo qalab:
shuban (udubdhexaad ah oo ka samaysan dhoobo, pine loo isticmaalo oo keliya marin);
laamood oo yar yar;
halbeegyada farshaxanka - boodhadhka, sharaabooyinka, tirooyinka yaryar;
Cajaladda iyo wargeyska Scotch;
rinjiga buufinta madow;
qoryaha daboolka, tuubada iyo maqasyada.
Ma taqaanaa? Mawduuca geometrical waxaa lagu leeyahay magaciisa ... miisaanka (tani waa sida erayga hore ee Giriigga "konos" loo turjumay).
Wax walba waa mid dhow, waxaad bilaabi kartaa:
Wargeysyada waxaa lagu dhejiyaa tuubo dheer. Ka dibna u wareegay goobo, geesaha ayaa la qabsaday tuubo.
Si loo xoojiyo saldhigga, waxay ku duubaan waraaqo jarjar ah (wargeys ayaa hoos u dhici doona), ma ilaabin inaad ku socoto dusha sare ee cajalad.
Ka dibna waxaa jira rinjiyeyn - ku yaal goobta shaqada si siman loogu daboolay buufin ee rinjiga brown.
Ka dib markaad u deynayso dusha ka bax, qalaji kondhil, adigoo ka taxadaraya inaadan ka tagin "dhibco balckeed" wareega.
Hubinta in ay si ammaan ah u xireen, sii wanaajinta qurxinta. Dhuxusha waxaa lagu dhejin karaa wareegga shaqada oo dhan, ama waxaa lagu dhajin karaa iyada oo la saarayo abeeso dibedda ah. Meelaha cajalad-ka-qaadashadaada.
Waxyaabaha ku jira qaabka tirooyinka yar yar ama garaaca yar ayaa badanaa lagu rakibay gudaha gudaheeda, inkastoo aad tijaabin kartid meeleyntooda.
Si aad u sameyso mucjiso sidan ah, marka laga reebo asaasaha laftooda ayaa loo baahan doonaa:
rinji akril cagaaran;
Koorsada shaqada waa sida soo socota:
Bilawga, xisaabi inta xuduudda ee gacanta ku jirta. Dabcan, waxay u baahan yihiin in si fiican loo nadiifiyo.
Iyada oo maskaxda lagu hayo, waxaa laga sameeyaa kaarar ku filan oo ku haboon (sidaas darteed mustaqbalka waxaa jiri doona hulalka). Xoog-saarista, jarjar goobeed oo laga soo qaaday kartoon isku mid ah ayaa kuxiran saldhigiisa.
Cones waxaa lagu dhajiyaa heerarka, korna u socdo. Kuwa ugu weyn waxaa lagu dhejiyaa hoosta, kuwa dhexe ayaa loo ogolyahay inay waxoogaa ka sareeyaan, halka kuwa yaryar ay u dhowaan doonaan dhinaca sare.
Marka qalinkiisu yahay mid qalalan oo "laamood" waa la go'aamiyaa, waxay si taxadar leh u rinjiraan, rusheeyeen lafdhabarta.
VIDEO: GARGAARKA BULSHADA
Waa muhiim! Ujeedooyinka nabdoon ee dabka, geedahaas waa in aan lagu qurxin tayada hodanka ah (iyo, gaar ahaan, shumacyada gubanaya).
Geedka Christmas waa diyaar. Sida qurxinta, kubadaha caag ah ama tirooyinka yaryar ayaa badanaa la isticmaalaa.
Awoodda madaxtooyada waxay ka soo kabaneysaa wixii gudaha ah. Inkastoo tani ay tahay inay si haboon u kaydiso qalabka, sababtoo ah waxaad u baahan doontaa:
furka geedaha furan ee tiro badan;
Kaarbo qaro weyn;
silig qaro iyo dhuuban (waxay noqon laheyd mid fiican in la barbardhigo finanka);
maqas iyo nabaro;
Ka dib markii la hubiyo in wax walba diyaar u yihiin, waxaan bilaabi doonaa kiniisadda:
Midka ugu horreeya ee kaararka ayaa gooyay hoosta. Foomka - markaad tixgelisid (laydi, wareega, oval).
Ka dibna derbiyo soo gal. Googo jarjarrada kartoon ku haboon ee cabirka, iyaga ku dheji kalluunka. Laakiin xitaa tan ka hor, midhaha miraha waxay ku xiran yihiin silig khafiif ah (qiyaastii dhexda). Telefoonka xad-dhaafka ah ayaa la jarjarey.
Darbiyadu waxay ku xiran yihiin hoosta iyagoo leh faashad ama silig. Kala wareegida u dhexeeya iyaga ayaa qarsoodi kara qoryaha yar yar ee wareega hoose.
Hadda jees jeeso. Waxaa laga xadhigay xarig qaro weyn, oo aan illoobin si loo daboolo tinsel, qaybo jilif khafiif ah ama qurxiyo kale. Labada geesoodba waxay kuxiran yihiin derbiyada kaararka ee ku dheggan (haddii sheyga guud yahay, doorka xakamaynta waxaa loo xilsaaray xarig khafiif ah).
Ma taqaanaa? Burooyinkeeda dhaqdhaqaaqa Afrika waxay kori karaan ilaa 45-50 kg.
Dhamaadka dhammaadka waa quruxda. Wixii quruxda badan ee quruxda badan ee midabada leh.
Alaabta lagu ciyaaro oo loogu talagalay geedka kooniska
Waxay dhammaan ku xiran tahay maskaxdaada.
Habka ugu fudud ayaa ah in lagu dhejiyo laalaab khafiif ah xagga sare ee boomka, ku xir xiraha yar yar ee bartamaha ama wuxuu ku dhajiyaa baalasha dhalaalaya.
Malaa'igta sidoo kale waxay u muuqdaan kuwo wanaagsan. Buruqda ayaa lagu rinjiyeeyaa midab "festif" ah (cad, buluug ama midab leh) oo ku rusheeyaa nalal. Dhinaca dhabarka ku xiran waa baalal gogol oo jilicsan oo lagu duubo maskax wanaagsan. Inkasta oo aad samayn karto iyada oo aan, si taxadar leh u xirnayd alaab dhalaalaya. Waxay samayn kartaa noocyo kala duwan oo isugu jira, rinji leh rinji akrilik. Inkastoo ay qaadan doonto dulqaad - kuwa ugu quruxda badan waa kuwa rinji geliyey talooyinka dhammaan "xididdada". Nooca midabka: midab jaalle, buluug, cagaar cagaaran.
Qurxinta xiiso leh ee geedka kirismaska ​​ah waxay noqon doontaa oranji qallalan.
Doorasho kale oo aan caadi ahayn waa in lagu qurxiyo kondhiyada laftooda oo leh dareen badan oo midab leh ama dareemay kubbado. Qalab noocan oo kale ah wuxuu ku jiraa iibka, iyo qaar ka mid ah kalsoonidu waxay siineysaa feejignaan geedka oo dhan.
Waxaan hore u ogaanay inaad ka dhigi kartid xayawaan aad u badan oo aad dareento. Waxay kaloo soo saartaa barafka. Laakin marka lagu daro jarida dhejiska ee walxaha dharka ah, halkan waxaad ku dhejin doontaa ulaha dhalada ka yar jalaatada (kuwani waxay noqon doonaan skis), iyo bilowga hore rinjiga laftiisa waa caddaan ama buluug.
Waa muhiim! Dhoobada iyo dhoobada ayaa kaliya dhigay dusha nadiif ah. Sidaa darteed, koontooyinka waa in aan lagu nadiifin oo kaliya boodh, laakiin sidoo kale maydhay biyo socda (dabcan, ka dib markii ay u qalajinayeen).
Laakiin ugu wanaagsan ee farshaxanka waa shimbiraha shimbiraha. Waxaa laga sameeyey:
dhoobo waaweyn oo waaweyn;
yar yar (oo ku habboon ping-pong);
silig ganaax ah;
dhalooyinka khafiifka ah iyo xabagta.
Amarka shaqada waa sida soo socota:
Qalabka iyo kubada ayaa ku xiran, ka dibna ku rinjiray hal midab.
Markaas baalasheeda iyo baalasha ayaa laga jaray kaararka, kuwaas oo sidoo kale lagu rinjiyeeyay rinji.
Ka dib qalajinta, waxay ku dheggan yihiin goobta shaqada.
Samee fiilooyin ka sameysan silig, kaas oo qaban doona dhismaha oo dhan. Waxaa lagu rinjiyeeyaa isla midab.
Xiddooyinka ugu dambeeya ee la soo dhejiyo ayaa lagu dhejiyaa, iyagoo badalaya indhaha iyo guluubka.
Iyada oo tiknoolijiyadaan, waxaad ku heli kartaa qurxiyo kale oo badan oo ah qaabka tirooyinka, kaas oo siin doona Sannadka Cusub geed geed dabeecad aan la ilaawi karin.
Waa hagaag, waa maxay fasax aan lahayn garland. Nasiib wanaag, si aad u sahlan. Laga soo bilaabo qalabka la heli karo qalabka loo baahan yahay:
Kutubyada (badankooda - muddada dheer ee alaabtayadu ay soo baxayso);
xadhig ama laba-jibbaar (inkasta oo xarriiqa dhuuban uu samayn doono);
rinji akril (dahab ama lacag);
Ma taqaanaa? Dhaqanka jaahilka ah, barar ayaa calaamad u ah bacriminta.
Boorashka iyo wasakhda bilaashka ah ayaa la jarjarey (kali talooyinka qudha).
Ka dib markaad sugto meelaha banaan inay qalalaan, qaboojiyaha waxaa loo geliyaa dusha sare ee mid kasta oo leh boorso.
Ka dibna qaado xargaha oo jar jar qayb ka mid ah dhererka la rabay. Ku dheji dhagaha, hubi inaad sameysid nodules, haddii kale buruunku si xor ah ayuu u duuban yahay.
Ka taxadar wakhti yar. Caadi ahaan inta u dhaxaysa miraha waxeey u sameeyaan farqi 10-20 cm (oo xarig yar oo dherer leh ayaa khatarta qatarta).
Wixii aragti xarrago leh, qaansooyinka lafdhabarku waxay ku xiran yihiin dushooda.
Isku xirka shamaca
Si aad u dhisto qalab noocan oo kale ah gacmahaaga ayaa ah arrin sahlan, gaar ahaan haddii ay ku dhow yihiin:
CD da 'old;
lakabyo leh jajabyo iyo nabaro naftooda.
Shaqadu waa mid sahlan:
Ka tegista meel dhexe ee qashinka, xabagta waxaa laga dalbadaa wareegga xajmiga, kuwaas oo ku xiran gabyaaga.
Ka dib markaad iyaga dejisid, waxay u wareegaan miisaan (oo la gooyey).
Marka ay ka soo baxdo, dhirbaaxada roodhida ah iyo burooyinka (ama walxaha kale ee qurxinta - lagu hagaa dhadhankaaga).
Shumac la dhigo oo ah "shaashad" ayaa laga dhigaa bartamaha. Badbaadada waxaa lagu dhajin karaa diskka.
Waa muhiim! Isticmaalidda shamaca loogu talagalay ujeedada loogu talagalay, hubso in shumaca uusan guban ilaa dhamaadka.
Wax kasta, hal xariif ah oo dheeraad ah ayaa diyaar u ah inuu isticmaalo.
Kubad sharaf leh
Doorasho wanaagsan oo loogu talagalay kuwa jecel tijaabooyinka.
Si aad u hesho qaabka sida qurxinta waxaad u baahan tahay kubad qiyaas ah oo aan ikhtiyaar lahayn (doorbidayaa xumbo ama caag dhuuban). Dabcan, qoob-ka-ciyaarka, cajalad iyo faashad sida PVA, iyo sidoo kale rinjiga. Dhammaan arrimahan ayaa tallaabo qaadaya:
Laga soo bilaabo aasaaska farshaxanada mustaqbalka ka saar boodhka.
Isku darka cabbiraha isku midka ah ayaa si fiican u rinjiyeeya qaabka akrilku - waxay noqon kartaa mid adag, ama adigoo daboolaya talooyinka keligiis (xitaa xitaa xarrago badan).
Kadib markaad qalajiso, way isku qabteen. Habka ugu fudud ee loo ogolaan karo midhaha lakabka joogtada ah, oo aan jabin. Inkasta oo ay u muuqato in ay u muuqato in si gooni gooni ah loo qabsado, markaa maxaad u maleyneysaa.
Qeybta sare ee cajaladdu waa la isku dhejiyay, taas oo xajin doonta qurxinta.
Hackka soo baxay wuxuu noqon doonaa quruxda weyn ee albaabka gudaha ama alaabta guriga. Haddii aad qaadatay kubad weyn, waxaa laga yaabaa inay noqoto wax la mid ah sida jilicsanaanta jiilaalka, laga joojiyo dabayl ama si toos ah saqafka.
Kala soocaan beertaada adigoo gacmo-farshaxan leh. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad aragto fasal mihnadeed oo ku saabsan soo saarista dhuxusha iyo dhirta timirta laga bilaabo dhalooyinka qurxinta guriga.
Iyada oo dadaal yar, waxaad heli kartaa badeecada, taas oo sidoo kale si buuxda u buuxinaysa sawirka guri dabaal ah. Tani waa xiddig, ee soo saarista kuwaas oo u baahan doona:
mug weyn oo kala duwan;
xadhig xawaaraha (dhumuc iyo qafiif).
Ma taqaanaa? Meelaha laga helo geedaha lafaha ah, waxaa badanaa loo isticmaalaa mashiinnada mashiinka dhoobada ah - laga bilaabo dusha sare ee alwaaxyada ah sida boorsooyinka lagu dhaqdo, qaybaha korontada ee casriga ah.
Waxay ka bilaabataa diyaarinta asaasiga ah:
Telefoonka ugu horeeya waxaa la jarayaa dhumuc weyn - waa in uu helo 5 skewers oo isku mid ah.
Qiimaynta meesha ay joogaan, xaji xidhaha: ku qabso xariiqda isgoyska ee xarig leh xarig khafiif ah ama si tartiib ah u xoqaya qaybta shaqada ee isla meesha.
Ka dibna xargaha shaqada ku dheji - nuqulo badan oo dhexdhexaad ah oo dhexdhexaad ah si aad u yar yar ee geesaha.
Ha iloobin in mid ka mid ah ulaha ay qaadan doonaan. Hareerahana waa la duubay si ay u noqoto mid laga soo qaado cajalad.
Ugu dambeyntii, xiddiggu waxaa lagu qurxiyaa maraqyada ama kubadaha yaryar.
Waxyaabaha la dhammeeyey waxay soo koobi doonaan aragtida albaabka ama geeska u dhow derbiga.
Cones iyo alaabta kale ee kaynta: isku dhafka hadiyadaha dabiiciga ah
Cones waxay u egtahay mid aad u wanaagsan oo la xidhiidha banaan iyo qalab kale. Tani waa xaqiiqda marka qof kastaa uu helo "farshaxiisa".
Waxaad sameyn kartaa xusuusta xiisaha iyo suxuunta gacmahaaga xittaa laga bilaabo balaastikada, laakiin marka hore waxaad u baahan tahay inaad si fiican u qalajiso.
Waxsoosaarka caagga ah
Baastiin iyo buruqyo ayaa loo tixgeliyaa nooc ka mid ah farshaxanka farshaxanka carruurta.
Inta badan, sayidyada dhallinyarada ah fadlan kala sooc sheyga fudud sida:
Kalluunka. Hal boodh furan ayaa lagu beddelaa iyada oo lagu darayo xirmooyin caag ah, dhegaha, lugaha, indhaha iyo sanka. Kicinta la midka ah xayawaankan la yiraahdo tufaax tufaax ah oo ka soo baxa wax la mid ah. Haddii qadarka dhoobada u oggolaado, waxaad jirka ka saari kartaa adigoo isticmaalaya nuugyo fiiqan sida cirbadaha.
Foxy Nidaamku wuxuu ku saabsan yahay isku mid, laakiin waxaa jira farqi u dhexeeya tirada banaan (3 miro oo kala duwan ayaa loo baahan yahay, kan ugu weyn wuxuu u socdaa sida jidhka) iyo midabka "qulqulka". Ujeedooyinkaas oo kale, qaado qiyaasta cad, madow iyo xaydhada.
Yaxaasyada. Cones waxaa lagu rinjiyeeyaa quruxda cagaaran waxayna ku xiran tahay jirka oo leh jilib. Si loo hubiyo kalsoonida, 3-4 irbado yaryar ayaa ku xiran talooyinka paws.
Waa muhiim! Isku xiridda hal-abuurka ugu yar, isku day inaad isticmaasho dhoobo ujeeddadeedu tahay, oo aan dhadhamin.
Dhammaan farshaxanadani waxay ku midoobaan fududaan iyo helitaan: marka dhan, qalabku wuxuu u baahan yahay kaliya qaddar yar. Waxaa sidoo kale jira faa'iidooyin ka yimaada waxqabadyadaas - la shaqeynta banaanbaxa caagga ah, carruurta waxay ku tababaraan xirfadaha wanaagsan ee dhaqdhaqaaqa.
Waxaan ku dari karnaa suunka
Inta badan, natiijada ka dhalatahaan, waxay leedahay qurux badan gnomes.
Qashinku waxay u baahan yihiin wax yaryar: furan furan oo leh astaamo iyo waxyaabo kale (cayaaraha ama saqafyada yaryar, caanaha dhuuban). Shaqadu waa aasaasiga:
In lagu yareeyo maqaarku jaray sare.
Meesha meeshan madaxa. Waxaa loo diyaariyaa si gooni ah - indhaha iyo afkiisa.
Koofiyaddan oo laga soo qaado maqaayad, waxaa laga sameeyaa dalool (cajalad lagu qaato burcad yar ayaa la keenaa), iyada oo aan illoobin kadibna dib loo dhigo.
Markaad madaxa hagaajisid, dhinac kasta dhinac walba waxaad ku lifaaqdaa qaab laamo ah ama laamo yar.
Sawirku wuxuu kabi doonaa kabaha kabaha furan.
Dad badan ayaa si tartiib ah ugu dhegay madaxa madaxa dabiiciga ah ee sintepukh - way soo baxaysaa.
Laga soo bilaabo iskudhafka isku mid ah leh madaxa madaxa ka soo bixi kara skier. Фигурку ставят на две ярко выкрашенные палочки из-под мороженого, а в руки помещают тонкие зубочистки или слегка сточенные спички. Узкий лоскуток ленты здесь играет роль шарфа. При желании таким способом можно сделать целую группу.
Ma taqaanaa? Dayrta kasta, dhirta ayaa qiyaastii 1/6 ee cirbaddeeda, kuwaas oo lagu beddelay cirbado cusub guga.
Sidoo kale, hesho iyo qurxinta jiirka. Kaliya wax iyo farqiga aan u baahannahay canaan aan lahayn albaab iyo pawn gacmaha. Daboolka waa xargaha bistoolada ah ama geed canab ah oo khafiif ah.
Kedisyada ayaa ah mid wanaagsan - kaydka la ururiyo xilliga dayrta waxay kicin kartaa noocyada kala duwan ee gacmaha.
Iyada oo ka qaybqaadashada jimicsiga waxaad sameyn kartaa jilayaal badan: isla gnomes iyo ragga kale ee yar yar, xayawaanka, iyo, dabeecadaha sanadka cusub ee gabayada ee lagu aqoonsan karo oo dhan. Way fududahay in Santa Claus la dhigto Barafka Barafka ee maqaarka sida, haddii aad leedahay:
banaanbaxyada dabiiciga ah (kalluunka, xayawaanka);
Calaacal leh jajabyo;
suufka iyo suufka;
Baro sida loola jeedo qaababka iyo waxa la sameyn karo.
Dhamaan arrimahan ayaa ku lug leh amarkan:
Labada sanadood ee jimicsiga ayaa afka, indhaha iyo indhaha.
Laga soo bilaabo xargaha duubka ee suufka, waxaad helaysaa koofi (awoowe sidoo kale wuxuu u baahan yahay gadhka), taas oo madaxa lagu dhajiyo.
Kadibna dharka waa la rinjiyeeyay: Daararka Barafka - buluugada buluugga ah, ee Santa Claus - casaan.
Kaadida cabbiraha ku habboon waxaa lagu duuduubay lakab khafiif ah oo suuf ah isla markaana isla haboon, ka dibna loo oggol yahay inay qalalaan.
Suufka suufka ayaa si taxadar leh loo gooyaa kala badh oo lagu dhajiyo dhinacyada budada - gacmaha ayaa diyaar ah. Xaaladda awoowe wacan, waxay sidoo kale rinjiyeynayaan, ma iloobin in ay u dhiibaan shaqaale dharka suufka ah, oo lagu daweeyo buluug ama buluug buluug ah.
Waxay ku xiran tahay madaxa iyo "istaagi" si xasilooni fiican leh.
Lamaane festi waa diyaar.
Ha iska tuurin caleemaha yellowed.
Laga yaabe in guri kasta uu jiro caleemo dhowr ah oo la ururiyo xilliga dayrta. Kuwa ugu caansan ee "deyn ururiyaasha" sida wanaagsan, waa dabcan, carruurta. Ha ku degdegin inaad ku dhufatid, sababtoo ah kaydka noocan oo kale ah ayaa runtii ka dhigaya mid ka mid ah walxaha qurxinta sida geedka qurxinta - sare.
Waa muhiim! Hawlgalka noocan oo kale ah waxaa loo isticmaalaa sida aerosol aerosol, iyo walxaha timaha. Waxyaabaha ugu muhiimsan waa in la qiyaaso codka: midabyo yar-yar oo qurux badan ayaa ku haboon guriga dahabka.
Liiska qaybaha kambuyuutarkooda waa sida soo socota:
vase ubax (dherooyinka ugu fiican);
ayaa la baxaa iyadoo la raacayo;
laan yar oo ah geed (sida ikhtiyaari - ul u ah suunka);
saldhigga sare (tusaale, kubbadda xumbada);
boodhka, boodhka, qaansooyinka ama waxyaalaha kale ee qurxinta.
Saldhigga, godka ayaa la sameeyaa meesha jirridda loo rogay, kaas oo isla markiiba lagu dhejiyo koolada.
Tallaabada xigta waa isku-dhafka. Inta u dhaxaysa xubno spruce waa inay ahaadaan meel caleemo.
Laantu waxay ku sii socotaa dhinaca hoose ee dharka. Ujeedadaas, labadaba saliida dareeraha ah, ka dibna labadaba dhuujiya (malab, alabaster, hoobiye cement-sand ama macmacaan), iyo mid adag (gabal dhuxul ama xumbo gooyay sida saxda ah ee weelka si ay ugu istaagto xagga hoose) waxay ku haboonaan doontaa.
Ka dib markaad sugto ilaa inta kaadhka si buuxda loo go'aamiyo, waxay bilaabaan qurxinta - ku tiirsanaan dhadhankaaga.
Baro waxyaabo dheeraad ah oo ku saabsan fikradaha kale ee abuuraya dusha sare.
Tiknoolajigaan badanaa wuu isbedelaa Tusaale ahaan, halkii laga soo iibsan lahaa saldhig, qaar badan ayaa qaata kubbadda teniska ama kubbadda wargeyska oo si adag loo xakameynayo, ka hor inta aan lagu daaweynin koolada.
Waxaan bartay inta badan alaabooyinka la dhisi karo laga bilaabo koontooyinka caadiga ah. Waxaan rajeynaynaa in fikradahaasi ay rafcaan u yihiin akhristeyaasheena. Ha ahaato hannaanka hal-abuurka ahi waa uun farxad!